Hubi sida ay sirtaadu u sugantahay: cracklib-check | Laga soo bilaabo Linux
Hubi sida sirta ah ee lambarkaaga sirta ahi u yahay: cracklib-check
Waqtigan xaadirka ah waxaan cusbooneysiinayaa qaar ka mid ah furayaasheyda sirta ah, anigoo si fudud u bedelaya furaha eraygeyga ee kootooyinkeyga ee aan abuuray 6 bilood ama 1 sano ka hor, maadaama ujeedkeygu uusan aheyn inaan marwalba isla passwordka sifiican uga tago ... hada qaar waan cusbooneysiinayaa.
Daqiiqado yar ka hor ayaan maqaal ka qoray samaynta oo waxaan horeyba uga qoray mid kale oo ku saabsan pwgen (Waan sii wadaayaa tan) laakiin hadda shaki ayaa iiga jira: Intee in le'eg ayay aamin yihiin sirta furahaygu?
In kasta oo ay run tahay in marka la isticmaalayo xaraf yar, far waaweyn, lambarro iyo astaamo kale la og yahay in ereyada sirta ah ee aadka u xoogan la soo saaro, had iyo jeer way wanaagsan tahay in codsi laguu sheego: «haa cunug, lambarkaaga sirta ah waa mid heer sare ah»😀
Tan waxaa ku jira amarka cracklib-jeeg (waxaa iska leh xirmada libcrack2)
Si aad u rakibto si fudud u rakib xirmadaas: libcrack2 (on Debian - » sudo apt-get install libcrack2 iyo Ubuntu - » sudo apt-get install cracklib-runtime libcrack2)
Kadibna waa inaan dhaafnaa erayga sirta ah waana taas, taasi waa ... waxaan ku fulinaa terminal:
Sababtoo ah Debian waxay ii shaqeysaa oo keliya aniga oo isticmaalaya sudo ama u ordaya xidid ahaan, taasi waa sababta aan ugu isticmaalo sudo tusaalaha
Waxay arki doonaan inay sugayso, taasi waa, waxay kaliya ina tusaysaa tilmaamaha inaan wax qoro ... halkaas, aan dhahno: fromlinux.net iyo ... Waxaan kaaga tegayaa shaashad shaashad ah oo runtii kaa caawin doonta inaad fahamto:
Sidaad u aragto, waxay qoraan eray sir ah waxayna riixaan [Enter] waxayna u sheegi doontaa sida wanaagsan ee loo hubiyo / loo hubiyo lambarkooda sirta ah, shuruudaha waxay ku saleysan yihiin in erayga sirta ah uusan ku jirin kaliya xarfaha, iyo sidoo kale xarfaha kala duwan, iwm
Hab kale oo loo hubiyo lambarka sirta ah waa adeegsiga echo iyo gudbinta erayga sirta ah ee tuubbada si loo cracklib-hubiyo, dhammaadka shaashada ayaan ku tusay sida, asal ahaan:
Hagaagna wax badan oo lagu daro ma jiraan, tan waxaan filayaa inaad xiiso kuu yeelan doonto 😀
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Shabakado / Adeeg » Hubi sida sirta ah ee lambarkaaga sirta ahi u yahay: cracklib-check
Ma jiri doonaa wax la mid ah Arch repos?
Waxay ila tahay inay tahay php-crack (AUR), laakiin waxaan kaliya isku dayay inaan rakibo waxayna i siisaa qalad isku-duubni ah. Aniguna caajis baan ahay inaan helo sida loo saxo. 😛
Aniguba sidoo kale, aad ayaan uxunnahay ...
Nope, taasi may ahayn, waa cracklib oo kujira meelaha lagu kaydiyo, laakiin runtii ma jecli inay ku jawaabto oo kaliya Ok. Waxaan doorbidayaa barta aan ku qoray faallooyinka maqaalka kale ee qiyaasaya waqtiga ay qaadaneyso in la jabsado lambarka sirta ah.
Xiiso leh, laakiin X / ubuntu oo kaliya rakibidda libcrack2 kuma filna, waxaad u baahan tahay inaad rakibtid cracklib-runtime.
Waad ku mahadsantahay macluumaadka, horey ayaan u tifaftiray boostada 😀
Luis Armando Medina dijo
Waa qodob xiiso leh laakiin Isbaanishka qalabku ma fikirayo waxyaabo badan, waxaan dhigay ereyo ii muuqday kuwo ii muuqda waxayna igu bixiyeen OK inay tahay inay u muujiso inay yihiin qaamuus ku saleysan. Markaa yaan loo qaadan "sugid" rasmi ah. Farxad
Jawaab Luis Armando Medina
Ma aanan aqoon qalabkan, oo aad u xiiso badan. Mahadsanid KZKG ^ Gaara 🙂.
Waxaan bilaabay inaan qiyaaso sababta ay kuugu tixgelinayaan inaad Taalibaan tahay!
Salaan iyo Thanks for tip!
Qaansada dhexdeeda ayaa udub dhexaad u ah sidaas
Lego Mindstorms EV3: Ku dhis robotkaaga wadnaha Legos iyo Linux
makepasswd: Abuur nambarro sir ah oo adag oo la isku halleyn karo